I-china abakhiqizi bomugqa weplastiki wokusebenzisa kabusha FAYGO
Lo mugqa usetshenziselwa kakhulu ukwenza ama-granules kusuka kudoti wepulasitiki, njenge-PP, i-PE, i-PS, i-ABS, i-PA ishq, ama-PP / PE amafilimu ayizigaxa. Okokusebenza okwehlukile, lo mugqa wokuthwebula ungakhiwa njenge-extrusion eyodwa yesiteji kanye ne-double stage extrusion. Isistimu yokuthanjiswa komzimba ingaba i-die-face pelletizing kanye ne-pelletizing cut-cut.
Lo mugqa wepulasitiki we-granulating wamukela ukulawula kokushisa okuzenzakalelayo nokusebenza okuzinzile. Isikulufu kanye nomgqomo we-bi-metal uyatholakala futhi i-alloy ekhethekile eyinika amandla nokuphila isikhathi eside. Kungumnotho ongaphezulu emthonjeni wamandla kagesi namanzi. Okukhiphayo okukhulu, impilo yesevisi ende nomsindo ophansi
Amandla (kg / ihora)
SJ-85 SJ85 / 33 85mm 33 100-150kg / ngehora
SJ-100 SJ100 / 33 100mm 33 200kg / ngehora
SJ-120 SJ120 / 33 120mm 33 300kg / ngehora
SJ-130 SJ130 / 30 130mm 33 450kg / ngehora
SJ-160 SJ160 / 30 160mm 33 600kg / ngehora
SJ-180 SJ180 / 30 180mm 33 750-800kg / ihora
Langaphambilini Umshini wokusika intamo yebhodlela lesikhumba
Olandelayo: Plastic Crusher Machine
Lolu hlobo lomshini wokugcwalisa isiphuzo se-carbonated luhlanganisa ukuwasha, ukugcwalisa kanye nokujikeleza kwe-rotary unit ku-unit eyodwa.Kuyimishini yokupakisha uketshezi esebenza kahle ngokuphelele.
Lo mugqa wokugcwalisa amanzi ukhiqiza ngokukhethekile amalitha amanzi acwilisa amabhodlela, izinhlobo zawo (b / h) yilezi: uhlobo lwe-100, uhlobo lwe-200, uhlobo lwe-300, uhlobo lwe-450, uhlobo lwe-600, uhlobo lwe-900, uhlobo lwe-1200 nohlobo lwe-2000.
Ipayipi lokushisa le-PERT